सडक सञ्जाल विकासको आधार | Rastra News
सडक सञ्जाल विकासको आधार
विसं २०३० को दसकमा आधुनिक पोखराको विकासक्रम सुरु भयो । त्यतिबेला हामीलाई लागेको थियो, सभागृह चोकदेखि बिपीचोकसम्मको बाटो यति चाक्लो किन चाहिएको होला, यहाँ त हवाईजहाज नै ल्यान्ड गर्न सक्छ भनेर । सरकारी अधिकारीहरुकै अगुवाइमा विमानस्थल र बसपार्कका लागि जग्गा अधिग्रहण गरियो । यत्तिको बजार हुँदा हुँदै किन ठूला पूर्वाधार चाहिए भन्ने अवस्था पनि थियो । अहिले त्यही न्युरोडको बाटो हामीलाई साँघुरो भइसकेको छ । अनि क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बल्ल बन्न लागेको छ । बसपार्क यसै अलपत्र छ ।
यसबीचमा धेरै खाले राजनीतिक परिवर्तन भए । राजतन्त्र नै समाप्त भयो । निरंकुश शासनसत्ता नै विकासको वाधक हो भन्ने भान हामीमा थियो । २०३६ सालको आन्दोलन हुँदै २०४६ सालमा एक दलीय पञ्चायती शासन ढल्यो । नागरिकमा ठूलो उत्साह थियो अब विकासको मूल फुट्छ भन्ने । नागरिक अनुकूलको संविधान बन्यो ।
– विकासको पहिलो आधार नै अहिले सडक सञ्जाल हो । यसैलाई प्राथमिकतामा अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले काम थाल्नुपर्छ ।
संसदीय चुनावमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएर एकमना सरकार पनि बनायो । नागरिकले जस्तो चाहना र उत्साहले जनप्रतिनिधि चुनेका थिए, त्यस अनुसार दलहरु अघि बढ्न सकेनन् । पार्टीभित्रै हुने अनावश्यक खेल र दलका नेताहरु जिम्मेवार हुन नसक्दा अहिले संघीय गणतन्त्रमा आइसक्दासमेत नागरिकहरु ढुक्क भएर बस्ने अवस्था सिर्जना हुन सकेको छैन ।
राजनीति र विकास परिपुरक नै हुन् । हो, विकासका लागि उदार र लोकतान्त्रिक व्यवस्था आवश्यक पर्छ । तर, हामी विकासमा कहिले अघि बढ्ने त ? राणा शासनदेखि नै जप्दै आएको विकासको मन्त्र अहिले पनि जपिरहेका छौं । तै पनि मूर्तरुप पाउन सकेको छैन । समयक्रमसँगै विश्वले प्रविधिमा धेरै फड्को मारिसकेको छ । यसले विश्वलाई ‘ग्लोबल भिलेज’ बनाइदिएको छ । नेपालले पनि सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो फड्को छ मारेकै छ । तर विकासका लागि आवश्यक न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार नबन्दा प्रविधिको उच्चत्तम प्रयोग गर्न सकिएको छैन ।
अहिले ‘स्मार्ट सिटी’ ले जताततै चर्चा पाएको छ । स्थानीय तहको चुनावी घोषणापत्रमा सबैजसो दलका उम्मेदवारले यसलाई ‘मुख्य नारा’ नै बनाए । समग्र पोखरा क्षेत्रको विकासको लागि गर्नुपर्ने तमाम सानातिना कुरालाई ख्यालै नगरी ल्याइएका यस्ता ‘सस्ता नारा’ बाट हामीले केही पाउने वाला छैनौं । पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम पोखरा प्रदेश नम्बर ४ को निर्विकल्प राजधानी हो । आसपासका साना सहरको तुलनामापोखरामा भौतिक पूर्वाधार भए पनि पर्याप्त छैनन् । प्रादेशिक राजधानीका लागि चाहिने धेरै खाले सुविधाको प्रबन्ध गर्नुछ । विकासको पहिलो आधार नै अहिले सडक सञ्जाल मानिएको छ । यसैलाई प्राथमिकतामा राखेर काम थाल्नुपर्छ । पोखरा बजार र आसपास क्षेत्रका सडक फराकिला छैनन् ।
ग्रामीण भेगमा बनाइएका सडक प्राविधिक रुपमा योग्य छैनन् । सडकको स्तर अत्यन्त कमजोर छ । राजमार्ग क्षेत्र जहाँ अत्यधिक गतिमा गाडी गुड्छन्, त्यहाँ नै व्यापारिक केन्द्र फस्टाएका छन् । घना बस्तीका कारण राजमार्ग चाक्लो बनाउन नसकिने अवस्था पनि विद्यमान छ । खोला खोल्सीहरुमा पर्याप्त पुलपुलेसा नहुँदा पनि आवागमन सहज हुन सकेको छैन । यसले गर्दा सामान ओसारपसारमा कठिनाइ त भएकै छ, सार्वजनिक यातायात प्रणाली यसबाट प्रभावित भएको छ ।
विकासको लागि पहिला सपना देख्नुपर्छ । प्रदेश नम्बर ४ त्यो पनि पोखरासँग प्रशस्त सम्भावना छन् । उत्तरी नाका कोराला र दक्षिणी नाका त्रिवेणी हाम्रा विकासका मुख्य ढोका हुन् । विकासको गतिमा लम्केका यी गतिशील राष्ट्रसँग सुमधुुर सम्बन्ध गाँसेर हामी हाम्रा आवश्यकता पूरा गर्न सक्छौं ।
उत्तर दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तारित आयोजना कालिगण्डकी करिडोर अन्तर्गत बेनी—जोमसोम ७८ किमी कालोपत्रे सडकका लागि २ अर्ब ५० करोड र जोमसोम–कोरला १ सय १० किमी २ लेनको ग्राभेल सडकको स्तरोन्नतिका लागि २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको छ । यतिबेला बेनी जोमसोम सडक खण्डमा ४ वटा निर्माण कम्पनीले काम थालेका छन् भने जोमसोमदेखि कोरलासम्म ७ निर्माण कम्पनीले धमाधम काम गरिरहेका छन् ।
बेनी जोमसोम कोरला सडक अबको ३ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । १० मिटर फराकिलो र यातायातका लागि सहज सडक निर्माण भएपछि पोखरादेखि कोरलासम्मको यात्रा ६ घन्टाभित्र पूरा गर्ने सकिने छ ।सडक सहज भएमा दैनिक हजारौं पर्यटक पोखरा हुँदै मुस्ताङ आवत जावत गर्न सक्नेछन् ।
सरकार कोरला सडक विस्तार गर्ने अभियानमा जुटेको छ। नाका सञ्चालनका लागि सरकारले लोमान्थाङ र छोन्हुपमा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि जग्गा लिएको छ । सरकारले भन्सार अध्यागमन,सुख्खा बन्दरगाह र सुरक्षा निकायका लागि जग्गा लिएको हो । कोरला नाका सञ्चालनमा आएपछि पोखरा हुँदै दक्षिणको त्रिवेणी तथा सुनौली हुँदै दक्षिण भारतसम्मको यात्रा सहज हुनेछ ।
यता नवलपुर जिल्लाको त्रिवेणीले प्रदेश नम्बर ४ लाई भारतसँग जोड्ने छ । धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिले महत्व बोकेको त्रिवेणी क्षेत्र यो क्षेत्रको अर्को गौरव हो । त्रिवेणीस्थित गण्डक ब्यारेजले नै प्रदेश नम्बर ४ लाई सिधा भारतसँग जोडेको छ । प्रादेशिक चुनाव लगत्तै त्रिवेणीमा रहेको छोटी भन्सारलाई स्तरोन्नति हुनेछ ।
भारतीय तीर्थयात्री एवं पर्यटकलाई त्रिवेणी हुँदै कावासोतीबाट सिधै पोखरासम्म जोड्नको लागि पनि नवलपुर उत्तमस्थल हो । प्रस्तावित राजधानी पोखरा र प्रस्तावित नवलपुर जिल्लाको सदरमुकाम कावासोतीबीचको दुरी जम्मा ९० किमी छ । कावासोती–भीमाद–पोखरा जोड्ने बाटोलाई प्रादेशिक राजमार्ग बनाउन भइरहेका प्रयास सफल भएमा अन्य प्रदेशको तुलनामा ४ नम्बर सर्वोत्कृष्ट बन्ने नै छ ।
पहाडी क्षत्रेमा उत्पादित सुन्तला, अदुवाजस्ता नगदे बाली बेचबिखनका लागि यही बाटोले मुख्य भूमिका खेल्नेछ । कावासोतीदेखि उत्तर कालीगण्डकीसम्म जोड्ने कच्ची सडक धेरै वर्षदेखि सञ्चालनमा छ । तनहुँ र नवलपुरको डेढगाउँलाई जोड्न कालीगण्डकी नदीमा मोटरेबल पुल बनिरहेको छ ।
काठमाडौं–पोखरा दू्रतमार्ग सँगै चितवन र लुम्बिनीलाई छोटो दुरीबाट जोड्न अहिले भइरहेका राजमार्गको स्तरोन्नतिमा सरकारले चासो देखिाइसकेको छ । चितवन–पोखरा–लुम्बिनीको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि अन्तरप्रदेश समन्वय जरुरी देखिन्छ । पहिला सञ्चालनमा आएर रोकिएको पोखरा देखि चितवन र भैरहवासम्मको हवाई सेवा अहिले सञ्चालनमा आएको छ । यसले पनि पोखराको पर्यटन प्रवद्र्धनका साथै आर्थिक गतिविधि चयायमान बनाउन मद्दत पु¥याउँछ ।
पोखराबाट भौगोलिक रुपमा निकै नजिक रहेर पनि स्याङ्जा, कुस्माजस्ता बजारमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदै गएको देखिएको छ । पोखरा बाहिर पनि सहायक सहरको दू्रतत्तर विकासका लागि यस्ता ठाउँ जोड्न सुरुङ मार्ग आवश्यक देखिएको छ । झट्ट सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ पोखराबाट स्याङ्जा र कुस्मा अबका केही वर्षमा सुरङमार्गबाटै छोटो दुरीमा पुगिनेछ ।
यी र यस्ता विकासका लागि नेतृत्व लिने भनेकै राजनीतिक दलका नेताहरुले हो । नेतृत्वमा रहनेहरु सबैखाले विषयमा पोख्त नभए पनि प्राविधिकको उचित परामर्श लिएर अघि बढ्न सकिन्छ । यसका लागि मात्र इच्छाशक्तिको खाँचो छ । हो, देश विकासको नारा लगाउँदै राजनीतिमा जीवन कटाउनेहरु प्रशस्तै छन् । राजनीतिक नारासँगै विकासको ‘भिजन’ अहिलेको आवश्यकता हो । कुनै पद पाउनकै लागि र सत्तामा पुगेर रमाउनका लागि कसैले राजनीतिलाई भ¥याङ बनाउनु कदापि राम्रो मानिँदैन ।
संघीय र प्रादेशिक चुनावको कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा कस्तो व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पु¥याउने भन्ने बारेमा मतदाता सचेत हुनुपर्ने बेला आइसकेको छ । जो बिना स्वार्थ राजनीतिमा लागेको छ, विकास बुझेको छ र नेतृत्वमा पुगिसकेपछि पनि उसले आम नागरिकको हितमा मात्र काम गर्नसक्छ उसैलाई आम मतदाताले साथ दिनुपर्छ ।
(थापा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ पूर्व अध्यक्ष हुन्)
थापाको यो लेख समाधान दैनिकमा प्रकाशित छ ।
Previous articleके लेखिरहेका छौं हामी ?
Next articleपोखरेलीलाई वर्षमा २ अर्बको खसीबोका मासु, ५० करोड भारततर्फ
‘सुनका गहनामा फलाम मिसाएको छैन’
काँग्रेसलाई ‘क्याडरबेस’ बनाऔं
भिसा शुल्कमा एकरुपता ल्याउन अमेरिकी प्रस्ताव
नेवि संघले क्याम्पस प्रशासनलाई चेतावनी दिदै यसो भन्यो
कञ्चनपुरका युवा नवराज कलौनीको मत चरी आउँला गित बिमोचन
बयली आधारभूत विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग
अडानको व्यवसायीक शिक्षा तालिम शुरु